Ireo dia vokatra 8 fanontana voafetra Apple | Vaovao IPhone
Luis del Barco | | Vaovao IPhone
Apple dia marika amam-panahy foana. Ny fananana vokatra avy amin'ny orinasam-paoma dia mahatonga anao hahatsapa ho hafa kely amin'ny ambiny, ary izany dia zavatra tadiavin'ny marika maro ananana, zavatra izay naorin'i Apple nandritra izay taona maro izay ny fisiana. Fa inona no mitranga rehefa atambatra zavatra irina amin'ny zavatra tokana na tena voafetra isika?
Tsy zatra mahita vokatra fanontana voafetra maro natombok'i Cupertino izahay, fa ny marina dia rehefa tsy mahita izy ireo dia tsy azon'ny rehetra. Ary, raha nisy izy ireo, dia azontsika atao ny manadino izany tsy azon'ny ankamaroan'ny olona maty intsony.
Asehonay anao anio ny vokatra Apple 8 izay sarotra tadiavina ary sarotra kokoa ny mividy.
1 EarPods vokatra mena
2 Mac Pro Product Mena
3 U2 fanontana manokana iPod
4 Macintosh tsingerintaona faha-XNUMX
7 Tapestry misy marika misy peta-kofehy
EarPods vokatra mena
Efa ela ny resaka momba ny vidin'ny Apple Watch Edition, satria maro no mihevitra azy ho lafo loatra amin'izay atolony. Toa efa hadinon'ny sasany ireo EarPods (amin'ny sary mitarika an'ity lahatsoratra ity), vita amin'ny volamena 18k ihany koa ary amidy amin'ny varotra fiantrana ao Sotheby's $ 461.000.
Mac Pro Product Mena
Anisan'ny lavanty mitovy sy noforonin'i Jony Ive ity Mac Mac ity dia tokana mitovy amin'ny EarPods. Ny lokony mena dia mahatonga azy io ho vokatra tsara tarehy, ary matanjaka. Ny vidin'ny varotrao? $ 977.000 tsy azo iadian-kevitra.
U2 fanontana manokana iPod
Ny fifandraisana misy eo amin'i Apple sy U2 dia zavatra iray izay lasa lavitra be. Nandritra izay taona maro izay dia efa imbetsaka no niara-niasa tamin'ny tarika manaikitra ny tarika, ny farany tamin'ny hetsika natao tamin'ny volana septambra, izay nanambarana ireo iPhones vaovao sy ny Apple Watch. Ny iPod amin'ny sary dia fanontana manokana an'ny maodely Klasika, amin'ny mainty ary miaraka amin'ny "Tsindrio Kodiarana" mena. Toy izany koa, ao ambadika misy ny sonian'ny mpikambana ao amin'ny tarika. Amin'izany dia singa maromaro no namidy ary mora kokoa ny mahita azy.
Macintosh tsingerintaona faha-XNUMX
Namboarina tamin'ny 1997 ho an'ny Macworld efa tsy misy intsony, ity angamba no vokatra tsy dia fahita firy ao amin'ilay lisitra. Raha tsy misy afa-tsy singa 12.000 amidy, io dia iray amin'ireo vokatra sarotra azo ankehitriny. 7499 XNUMX $ ny vidiny nangatahina.
Ity masinina ity dia nitovy tamin'ny tany am-boalohany, ankoatran'ny kely fa nanana ny sonian'ny Steve Wozniak tamin'ny casing. Ankoatr'izay, ny mpiara-manorina an'i Apple dia nanolotra taratasy manokana ho an'ny mpividy. Ireo singa 10.000 voalohany ihany no tonga niaraka tamin'ny sonian'i Woz. 999 $ ny vidiny.
Ny akanjo sasany izay somary mihoa-pampana ankehitriny ary tsy naharitra ela teny an-tsena. Tsy manontany tena amin'ny tenanay izahay hoe inona ny anton'ny fisintomana azy ireo.
Tapestry misy marika misy peta-kofehy
Namboarin'i Myra Burg, ireo ravin-totozy ireo no mandrafitra ny iray amin'ireo sombin-javatra tsy dia fahita ankehitriny, satria 25 monja ny singa vita. Ny vidiny fanombohana dia $ 350 ary tena maneho ampahany miavaka amin'ny tantaran'ny orinasa.
Na dia misy aza ny kojakoja sasany hita ao amin'ny magazay Apple ao Cupertino, dia tsy dia samihafa toy ireo izy ireo. Raha tsy misy fisalasalana, ny tena mahaliana indrindra dia ny Apple Watch tena misy sy tena izy, izay indrisy fa tsy dia misy endri-javatra kokoa noho ilay ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » 8 Incredible Rare Limited Edition vokatra tianao ho fanananao
Pa Castelli dia hoy izy:
Valiny tamin'i Pa Castelli
Gri Cave dia hoy izy:
Valiny tamin'i Gri Cueva
Manana TAM (Macintosh Annivers faha-20) eo akaikiko aho, miasa tanteraka, ary azoko atao ny manamarina fa iray amin'ireo singa fitaovana tsara indrindra naorina, na ho an'ny haitao sy ny hatsarany. Isaky izao dia mametraka CD aho hankafizako ilay feo mahafinaritra an'i Bose.
Kenneth alvarez dia hoy izy:
Valiny tamin'i Kenneth Alvarez
Mahafinaritra ny akanjo ,,, apetraka ary hatsipy any anaty liona
Daniel CB dia hoy izy:
eeemmm hitanao fa tsy tiako izy ireo ..
Valiny tamin'i Daniel CB
Podad IPad News 1x25 Podcast: Notsapainay ny MacBook Vaovao, Nintendo Ao amin'ny App Store ary maro hafa